कतै गल्ती त गर्नुभएको छैन ? - Naya Patrika
कतै गल्ती त गर्नुभएको छैन ?
काठमाडौं | साउन २५, २०७५
स्वस्थ शरीरका लागि नियमित व्यायाम गर्न र जंकफुडबाट टाढा रहन जरुरी हुन्छ । तर, यसबाहेक पनि कैयौँ यस्ता कमजोरी छन्, जसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पु-याउँछ । स–साना गल्तीले पनि गम्भीर समस्याको सिकार हुनुपर्छ । यस्ता समस्याले एकैपटक नभएर बिस्तारै–बिस्तारै ग्रसित बनाउँदै लैजान्छ ।
दिनभरिका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण भोजन हो, ब्रेकफास्ट । ब्रेकफास्ट नलिँदा हर्मोनल इनब्यालेन्स, स्मरणमा समस्या, मुड खराब भइरहने हुन्छ । यसका साथै मेटाबोलिज्म ढिला हुन जान्छ । जसले तौल बढाउनुका साथै शरीरलाई शिथिल बनाउन थाल्छ ।
शरीरमा पानीको कमी हुँदा थकाइ लाग्ने, स्किन फुस्रो हुने, झन्झट लाग्ने, कुनै कुरामा फोकस गर्न नसक्ने र क्रिएटिभिटीमा कमी हुनेजस्ता समस्या आउन थाल्छ । यसका साथै इम्युन सिस्टममासमेत समस्या देखिन सक्छ । त्यसैले पानी पिएर शरीरलाई सधैँ हाइड्रेट राख्नुपर्छ ।
गलत तरिकाले बस्ने
शरीर पर्फेक्ट भए पनि गलत तरिकाले बस्ने बानीले शारीरिक समस्या निम्तिने गर्छ । गलत बसाइले कम्मर दुख्नुका साथै पेट लाग्ने समस्या पनि हुन्छ । त्यस्तै, गलत पोस्चरले मसल्स बनाउँदा पनि पिठ्युँको लचकतालाई कम गर्न सक्छ । जसका कारण हल्का बस्दा पनि दुख्न सक्छ ।
लगातार पर्याप्त ननिदाउँदा दिनभर शरीर थकित हुनुका साथै झन्झट लाग्ने हुन्छ । जसका कारण डिप्रेसन हुने खतरासमेत उत्तिकै रहन्छ । यस्तो बानीले उच्च रक्तचाप र कोलेस्ट्रोलको पनि समस्या निम्त्याउँछ ।
पेनकिलरको बढी प्रयोग
अर्थराइटिस या मसल्स पेन हुँदा कतिपयले इबुप्रोफेन, एस्पिरिनजस्ता दुखाइ कम गर्ने औषधिको बढी प्रयोग गर्छन् । यस्तो औषधिको प्रयोगले अल्सर, पेटको दुखाइ, उच्च रक्तचाप, हृदयाघातलगायत समस्या निम्तिन सक्छ ।
यस्ता औषधिले केही समयका लागि त तपाईंलाई आराम दिन सक्छ तर दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर असर पार्छ । त्यसैले डाक्टरको सल्लाहविना कहिल्यै पनि पेनकिलर प्रयोग गर्नुहुँदैन ।
#जंकफुड #स्वस्थ शरीर